[Ukara] dr.fone - Nhọrọ iOS Data ndabere & Weghachi
dr.fone Toolkit - iOS Data ndabere & Weghachi
Ndabere & Weghachi iOS Data amama Mgbanwe
Otu click ndabere dum iOS ngwaọrụ gị na kọmputa.
Kwe Ka ịhụchalụ na iweghachi ihe ọ bụla ihe si ndabere ka a na ngwaọrụ.
Mbupụ ihe ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara gị na kọmputa.
Ọ dịghị data ọnwụ na ngwaọrụ n'oge weghachi.
dr.fone Toolkit - iOS Data ndabere & Weghachi ahapụ gị bibiri nkwado ndabere na mpaghara weghachite ọ bụla ị chọrọ site na iOS ngwaọrụ / ndabere.
dr.fone Toolkit - iOS Data ndabere & Weghachi na-ahapụ gị na-eme a dum ndabere nke fọrọ nke nta niile data gị iPhone na iPad, ma ọ bụ i nwere ike bibiri mbupụ ndị data na ị chọrọ ịnọgide na kọmputa gị. Mgbe e nwere mkpa, ị na-ike weghachi kwadoo data ngwaọrụ gị site na-ahọpụta ihe ị chọrọ. Ọ ga-aka mma karịa iji iTunes ma ọ bụ iCloud.
Ndabere gị iPhone / iPad na One Click
The dum ndabere ihe na-ewe gị otu click. Ozugbo gị na ngwaọrụ na-ejikọrọ na ahụrụ, usoro ihe omume ga-akpaghị aka ndabere data na gị na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. The ọhụrụ ndabere file agaghị overwrite nke ochie ahụ. I nwere ike ime ndabere mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Ndabere nile ụdị nke faịlụ
iPhone ndabere na weghachite amama Easy
Ndabere na weghachite iPhone data na otu click mgbe ejikọta ngwaọrụ gị.
iPhone ndabere Files gaghị ọhụrụ
Ị nwere ike ime ka iPhone si ndabere kwa ụbọchị na niile ndabere faịlụ na-echekwa na-agaghị anọchi ndị ọhụrụ.
Preview iPhone ndabere Content
Ịnwere ike ihuchalu nkọwa gị niile iPhone ndabere faịlụ na a iOS na nkwado ma weghachite omume, nke mere na ị nwere ike ijikwa gị iPhone ndabere ọma.
iPhone Weghachi Ga overwrite gị Data
Mgbe preview, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla ihe na gị iPhone na nkwado ndabere na mpaghara iji weghachi ya na gị na iPhone ma ọ bụ iPad. Ọ ga-dochie ọ bụla data ẹdude na ngwaọrụ gị.
Mbupụ gị iPhone Data
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ ma ọ bụ ibipụta gị data, ị nwekwara ike mbupụ ihe na gị iPhone ndabere dị ka ihe HTML faịlụ ma ọ bụ ndị ọzọ na ị chọrọ. Ọ dịzịrị gị.
N'agbanyeghị na ị na-eji ọhụrụ iPhone 7 Plus, iPad Pro, ma ọ bụ ochie iPhone 4, iPad 1, a iOS data mgbake bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka.
Nke a iOS nkwado ndabere na mpaghara weghachite na omume na-kpam kpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Export Data si ndabere Files
Dị ka ndabere faịlụ, ị nwere ike họrọ na-ha niile ma ọ bụ hichapụ ọ bụla n'ime ha na ị na-adịghị mkpa. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụchalụ na mbupụ ọ bụla ihe si ndabere faịlụ na kọmputa gị, na-azọpụta ha dị ka HTML, CSV ma ọ bụ vCard faịlụ.
Ndabere na weghachite data gị iOS ngwaọrụ mfe.
E nweghị data aba ke ini ndabere, bupu ma ọ bụ weghachi.
iOS Data ndabere & Weghachi Works maka All iOS Devices
Export kọntaktị na ozi na kọmputa dị ka .csv, .HTML, ma ọ bụ vcard;
Export WhatsApp ozi na kọmputa dị ka .csv ma ​​ọ bụ .HTML;
Export oku log, na ndetu, calendar, ncheta na Safari si ibe edokọbara na kọmputa dị ka .HTML.
3 Ụzọ ndabere Notes on iPhone na iPad
Nso ke iTunes ndabere?
Olee otú iji weghachi WhatsApp ndabere na iPhone na gam akporo ngwaọrụ
Ụzọ abụọ ndabere iCloud Ndi ana-akpo
Olee otú ndabere Data na Kpọchiri Akpọchi iPhone 7 (Plus) / Ghaat / 6s (Plus) / 6
iPhone ndabere extractor: Wepụ na Dịghachi iPhone Data
Olee otú Chọta iPhone ndabere Location na Hichapụ Backups
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka.